यी हुन् पित्त वा किड्नीको पथरी फाल्ने जडिबुटी, जानी राखौ
अगस्ट 27, 2019 अगस्ट 27, 2019 साइन्स इन्फोटेक	2 Comments जडिबुटी, डा. राम बहादुर बोहरा, पथरी
पित्त वा किड्नीको पथरी फाल्ने जडिबुटी !औषधिलाई गाउँघरमा अजम्मरी वा पत्थ चट्टा नामले चिन्ने गरेको पाइन्छ । यो औषधिलाई सन्जीवनी भन्दा खासै फरक पर्दैन । जहाँ पात झर्छ त्यही उम्रन्छ । यस्तो बहुमुल्य औषधिको उपयोगविहिन औषधि हाम्रो गाउँघरमा गमलामा रोपेको देख्नु भएको होला आउनुस् आज मैले यसै विषयमा प्रकाश पार्नेछु ।
प्रकृतिको अनुपम उपहार अजम्मरीको बारेमा यो औषधिको प्रयोग सहि तरिकाले भनेको समयसम्म प्रयोग गर्नुहुन्छ भने १०-१५ एमएम सम्मको पत्थरी फाल्दछ । हामीले औषधि सेवन गर्ने तरिका र कति समयसम्म खाने भन्ने जानकारी प्राप्त गर्न सकेमा विना पैसा लगानीमा पत्थर झार्न सक्नेछौं ।
यो औषधिको प्रयोग अन्य रोगमा पनि गर्न सकिन्छ जस्तै सेतो पानी बग्ने समस्या भएका महिलाहरूको लागि पनि उपयोगी छ । पुरुषमा हुने प्रोस्टेटको समस्याका कारण पिसाब थोपा-थोपा हुने भएमा समेत यो औषधिले राम्रो फाइदा गराउदछ । यति राम्रो बहुउपयोगी औषधि हुदा गदै हामीले औषधि खरिद गरेर खान्छौं यो हाम्रो कमजोरी नभए के हुन सक्छ ।
१. एक गिलास मनतातो पानीमा ४,५ पत्ता राम्रो पत्ता लिनुहोस् र पिस्नुहोस् । दैनिक कपडाले छानेर नियमित २ देखि ३ महिना सेवन गर्नुहोस् पत्थरी झार्दछ । हामीले यस्ता अनगिन्ती रोगीको पत्थर झार्न सफल भएका छौं ।
२. BERBERIS VULGARIS यो औषधि यही जडिबुटी पत्थर चट्टा अजम्मरीबाट बनेको छ । यो औषधि होम्योपैथीक फार्मेसिमा उपलब्ध छ । यो औषधि १० देखि १५ थोपा सम्म आधा गिलास मनतातो पानीमा राखेर दिनमा ३,४ पटक २,३ महिना सेवन गराउनाले सवै पत्थरी झार्दछ ।
नोट : औषधि सेवन गर्दा हमेसा पानीको मात्रा बढाउनु पर्नेछ । औषधि हमेसा विश्वासनिय कम्पनीको हुनुपर्छ । खाने तरिका नबुझेमा वैकल्पिक चिकित्सको परामर्शमा सेवन गराउनु पर्नेछ ।
← अन्तर्राष्ट्रिय युवा वैज्ञानिक सम्मेलन कात्तिकमा हुने
कहिलेकाहीं किन हातखुट्टा निदाउँछ ? →
2 thoughts on “पित्त वा किड्नीको पथरी फाल्ने जडिबुटी”